လက်ရှိ မင်းသား ဈေးကွက် မှာထိပ်ဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် အနုပညာကြေးလျှော့ယူနေရတဲ့ ပြေတီဦး - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / လက်ရှိ မင်းသား ဈေးကွက် မှာထိပ်ဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် အနုပညာကြေးလျှော့ယူနေရတဲ့ ပြေတီဦး
လက်ရှိ မင်းသား ဈေးကွက် မှာထိပ်ဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် အနုပညာကြေးလျှော့ယူနေရတဲ့ ပြေတီဦး
Apann Pyay 11:22 AM သရုပ်ဆောင်များ Edit
လက်ရှိ မင်းသား ဈေးကွက် မှာထိပ်ဆုံးက နေ ရပ်တည်နေတဲ့ မင်းသား ကတော့ အကယ်ဒမီ များရှင် မင်းသား ပြေတီဦး ပါ ။ သူဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဆတ်တိုက်ရိုက်ကူးနေသလို မိသားစုအတွက်လည်း အချိန်ပေး နေသူပါ။ မကြာခင်ကမှသမီးကြီး ပြေသုဒြာ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မော်ဒိုက် ကမ်းခြေ ကို မိသားစု လိုက် ခရီးထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ဈေးကွက် ဦးမော့ပြီး ဗီဒီယို ဈေးကွက် ခေတ်ပျတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ နာမည်ကြီးမင်းသား တွေလည်း ဗီဒီယို ရိုက်ကူး မူအပေါ် ပြန်လည်အာရုံစိုက်လာကြတာလည်းတွေရပါတယ်။ ခရီးကပြန်လာပြီး တာနဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနေတာကြောင့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမူနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ လည် ပြေတီဦးက Myanmar Celebrities ကို အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
” လက်ရှိမှာ ကျွန်တော် တို့ ဗီဒီယို ဈေးကွက် က အဆင်မပြေတဲ့ အခြေအနေပေါ့ . အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပရိုဂျူဆာ တွေအကုန်လုံးက ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေကြတာလေ.. ကျွန်တော် တို့လည်း လက်ရှိမှာ ဗီဒီယို တွေ ကို အချိန်ပေးပြီး ပြန်ရိုက်ပေး ဖြစ်တယ် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တစ်လကိုတော့ တစ်ကားလောက် ပုံမှန် ရိုက်ကူး ဖြစ်တယ် ” လို့ပြောပါတယ် ။
ရုပ်ရှင် ရိုတ်ရင် အနုပညာကြေးက ဗီဒီယို ဇာတ်ကား ရိုတ်ကူးမူထက် ပိုမြင့်မားတာကြောင့် ဗီဒီယို ပြန်ရိုတ်ပေးနေတာက ပရိသတ်အတွက်လား ဆိုတော့”ဟုတ်တာပေါ့.. အမှန်တိုင်းပြောရရင် ငွေရေးကြေးရေးအနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့က ရုပ်ရှင်ပဲ ရိုက်ချင်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် အရာရာ ကို ငွေကြေးနဲ့ တွက် လို့ မရဘူးလေ ကျွန်တော် ဆိုရင်လည်း ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေနဲ့ ပဲ ပရိသတ်အားပေးမူ ရရှိလာတာလေ။ အဲ့ဒိတော့ ဗီဒီယို ပရိသတ်အပေါ် ကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပေးရတယ် နယ်တွေမှာက ရုပ်ရှင်ရုံမရှိဘူး.. အဲ့ဒိအခါ ဗီဒီယိုကိုပဲ အားကိုးကြည့်ရတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ လည်း ရိုက်ပေးဖြစ်တယ် အဓိက က ပရိသတ်ကြောင့်ပါပဲ ပရိသတ်က ထမင်းရှင်ပါ.” လို့ပြောပါတယ် ။
လက်ရှိ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးတဲ့ အခါ အနုပညာကြေး က အရင်က လို မျိူး ယူ လို့ မရတဲ့ အခါ ဗီဒီယို ရိုက်ကူး မူအပေါ်အားလျော့တာ ရှိလား ဆိုတော့ ” အဲ့ဒိလို မရှိပါဘူး. အခု ဗီဒီယို ရိုက်ကူးတဲ့ အခါ အရင်ကထက် အနုပညာကြေး ကို အများကြီး လျှော့ယူ ပေးရတယ် ဒါကလည်း ရုပ်ရှင်မကြည့်ရတဲ့ နယ်က ပရိသတ်တွေ ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်ဖြစ်တဲ့ မြို့ ပေါ်က ပရိသတ်တွေပါ အနုပညာ ကြေးတွေအများကြီး လျော့ယူ ရလို့ ကျွန်တော်တို့အတွက်နစ်နာတာမျိူးတော့ရှိပေမယ့် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမူအပေါ်အားလျော့တာ တော့မရှိပါဘူး ကိုယ်လက်ခံပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပါတယ် ပြီးတော့ ပရိသတ်ပေးလို့ ဒီနေရာ ရောက်လာတာပါ ပရိသတ်အတွက် ရိုက်ပေးတာပါ” လို့ပြောပါတယ် ။
လက်ရှိ မင်းသား ဈေးကွက် မှာတော့ ပြေတီဦး က ရုပ်ရှင် တစ်ကားရိုက်ရင် ကျပ်သိန်း ၂၅၀ ရပြီးတော့ ဦးဆောင်နေသလို နေတိုး က ကျပ်သိန်း ၂၄၀ နဲ့ ဦးဆောင်နေတယ် လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုထားကြတာကို လည်း သိရပါတယ်။
လကျရှိ မငျးသား စြေးကှကျ မှာထိပျဆုံးက နေ ရပျတညျနတေဲ့ မငျးသား ကတော့ အကယျဒမီ မြားရှငျ မငျးသား ပွတေီဦး ပါ ။ သူဟာရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ဆတျတိုကျရိုကျကူးနသေလို မိသားစုအတှကျလညျး အခြိနျပေး နသေူပါ။ မကွာခငျကမှသမီးကွီး ပွသေုဒွာ ကြောငျးပိတျရကျမှာ မျောဒိုကျ ကမျးခွေ ကို မိသားစု လိုကျ ခရီးထှကျခဲ့ပါသေးတယျ။လကျရှိမှာ ရုပျရှငျစြေးကှကျ ဦးမော့ပွီး ဗီဒီယို စြေးကှကျ ခတျေပတျြနတေဲ့ အခြိနျမှာ နာမညျကွီးမငျးသား တှလေညျး ဗီဒီယို ရိုကျကူး မူအပျေါ ပွနျလညျအာရုံစိုကျလာကွတာလညျးတှရေပါတယျ။ ခရီးကပွနျလာပွီး တာနဲ့ ဗီဒီယို ဇာတျကား ရိုကျကူးနတောကွောငျ့ ဗီဒီယိုဇာတျကား ရိုကျကူးမူနဲ့ပတျသတျပွီးတော့ လညျ ပွတေီဦးက Myanmar Celebrities ကို အခုလိုပွောပွခဲ့ပါတယျ။
” လကျရှိမှာ ကြှနျတျော တို့ ဗီဒီယို စြေးကှကျ က အဆငျမပွတေဲ့ အခွအေနပေေါ့ . အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး ပရိုဂြူဆာ တှအေကုနျလုံးက ရုပျရှငျရိုကျဖို့ပဲ စိတျအားထကျသနျနကွေတာလေ.. ကြှနျတျော တို့လညျး လကျရှိမှာ ဗီဒီယို တှေ ကို အခြိနျပေးပွီး ပွနျရိုကျပေး ဖွဈတယျ ဗီဒီယို ဇာတျကား တဈလကိုတော့ တဈကားလောကျ ပုံမှနျ ရိုကျကူး ဖွဈတယျ ” လို့ပွောပါတယျ ။
ရုပျရှငျ ရိုတျရငျ အနုပညာကွေးက ဗီဒီယို ဇာတျကား ရိုတျကူးမူထကျ ပိုမွငျ့မားတာကွောငျ့ ဗီဒီယို ပွနျရိုတျပေးနတောက ပရိသတျအတှကျလား ဆိုတော့”ဟုတျတာပေါ့.. အမှနျတိုငျးပွောရရငျ ငှရေေးကွေးရေးအနနေဲ့တှကျမယျဆိုရငျ ကြှနျတျော တို့က ရုပျရှငျပဲ ရိုကျခငျြတာပေါ့ ဒါပမေယျ့ အရာရာ ကို ငှကွေေးနဲ့ တှကျ လို့ မရဘူးလေ ကြှနျတျော ဆိုရငျလညျး ဗီဒီယို ဇာတျကား တှနေဲ့ ပဲ ပရိသတျအားပေးမူ ရရှိလာတာလေ။ အဲ့ဒိတော့ ဗီဒီယို ပရိသတျအပျေါ ကိုလညျး ပွနျကွညျ့ပေးရတယျ နယျတှမှောက ရုပျရှငျရုံမရှိဘူး.. အဲ့ဒိအခါ ဗီဒီယိုကိုပဲ အားကိုးကွညျ့ရတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဗီဒီယို ဇာတျကား တှေ လညျး ရိုကျပေးဖွဈတယျ အဓိက က ပရိသတျကွောငျ့ပါပဲ ပရိသတျက ထမငျးရှငျပါ.” လို့ပွောပါတယျ ။
လကျရှိ ဗီဒီယို ရိုကျကူးတဲ့ အခါ အနုပညာကွေး က အရငျက လို မြိူး ယူ လို့ မရတဲ့ အခါ ဗီဒီယို ရိုကျကူး မူအပျေါအားလြော့တာ ရှိလား ဆိုတော့ ” အဲ့ဒိလို မရှိပါဘူး. အခု ဗီဒီယို ရိုကျကူးတဲ့ အခါ အရငျကထကျ အနုပညာကွေး ကို အမြားကွီး လြှော့ယူ ပေးရတယျ ဒါကလညျး ရုပျရှငျမကွညျ့ရတဲ့ နယျက ပရိသတျတှေ ရုပျရှငျသှားမကွညျ့ဖွဈတဲ့ မွို့ ပျေါက ပရိသတျတှပေါ အနုပညာ ကွေးတှအေမြားကွီး လြော့ယူ ရလို့ ကြှနျတျောတို့အတှကျနဈနာတာမြိူးတော့ရှိပမေယျ့ ဇာတျကားရိုကျကူးမူအပျေါအားလြော့တာ တော့မရှိပါဘူး ကိုယျလကျခံပွီး လုပျတဲ့ အလုပျကို အကောငျးဆုံးလုပျပါတယျ ပွီးတော့ ပရိသတျပေးလို့ ဒီနရော ရောကျလာတာပါ ပရိသတျအတှကျ ရိုကျပေးတာပါ” လို့ပွောပါတယျ ။
လကျရှိ မငျးသား စြေးကှကျ မှာတော့ ပွတေီဦး က ရုပျရှငျ တဈကားရိုကျရငျ ကပျြသိနျး ၂၅၀ ရပွီးတော့ ဦးဆောငျနသေလို နတေိုး က ကပျြသိနျး ၂၄၀ နဲ့ ဦးဆောငျနတေယျ လို့ ခနျ့မှနျးပွောဆိုထားကွတာကို လညျး သိရပါတယျ။